Imithetho eli-10 yokukhokela iprojekthi elungileyo yoyilo- i-Creativos kwi-Intanethi | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Imithetho eli-10 yokukhokela iprojekthi elungileyo yoyilo
Nangona phakathi konyaka we-2018 siqhele ukusebenza wedwa. Umsebenzi wokuzimela kunye nokuzifundisa. Xa sifuna ukwenza iprojekthi enkulu-enkulu siyanyanzelwa ukuba senze iqela. Kule meko, ayizukusebenza ukuba sijongana nabahlobo 'abasincedayo' emsebenzini. Kuya kufuneka sinike isikhundla sobukhosi ukuze simisele kakuhle iikhrayitheriya umntu ngamnye aziphetheyo. Ke, abanye baya kuba noxanduva olukhulu kwaye abanye baya kuba nomsebenzi omncinci. Sinemithetho eli-10, ubuncinci leyo siza kuyibona apha.
Imithetho eli-10 esiza kuyixoxa iza kuzama ukuba uzenzele eyakho iikhrayitheriya ukukhokela iprojekthi. Ke, xa usenza eyakho inkampani kwaye uqhuba iiprojekthi zakho, uya kuyazi amanqaku aphambili ukuba ube yinkokeli elungileyo.
2 Impembelelo kwiqela
3 Yonke into inenkqubo
4 Ukuhamba ngesikhephe kwicala elinye
5 Ukuba uyakwazi ukukhuthaza, uya kuba nabaphulaphuli
6 Phakathi kwakho nam
7 Ukuthembana nentlonipho
8 Tsala oontanga bakho
9 Khuthaza iqela lakho
10 Ilifa leNkokeli
Ndihlala ndisithi kufuneka ujonge inkokheli yeqela hayi umphathi. Kuyafana nakuwe kufuneka ukholelwe ukuba yinkokeli, isikhokelo hayi umphathi wobungqongqo. Ngale ndlela siya kugcina iqela lomsebenzi eliyilayo nelikhuthazayo. Ubuchule bobunkokeli buya kugqiba ukuba umntu usebenza kangakanani.
Xa usenza inkampani yakho, sihlala sicinga ukuba siyinto yonke. Oko akusebenzi ngaphandle kwethu kwaye yonke into esijikelezileyo siyabulela kuthi. Amandla aqinisekisi ubunkokeli. Ke unokuba nabasebenzi kwaye wenze imali, kodwa ngaba iqela liya kukhuthazeka okanye liyile ngokwaneleyo? Amandla akukuniki ubunkokeli bokufezekisa iinjongo zakho. Kuya kufuneka uthembeke kwaye ubaphembelele abasebenzi bakho ukuze bazive bekhokelwe kakuhle ukuya kwiprojekthi.
Yonke into inenkqubo
Sibonile imithetho emibini engafezekiseki kwaphela ngomzuzwana. Inyani yokudala iqela, inkampani kunye neprojekthi ethembekileyo ayikwenzi inkokheli. Oku kumalunga noomatshini, usuku lube lunye ngexesha. Kuya kufuneka ubeke iikhrayitheriya ezithile kunye nonxibelelwano nabasebenzi bakho yonke imihla ukuze lusebenze.
Ubunkokeli bukhula mihla le
Ukuhamba ngesikhephe kwicala elinye
Nabani na ongajongana neprojekthi kwaye alawule. Yenza kucace ukuba ithini indawo okuyo ukusuka kwindawo onelungelo kuyo. Ingxaki iza xa ufuna ukufikelela usukelo. Ukuba awukwazi ukwenza abo bahamba nawe babone injongo, awunakuba ukhokele kwanto.
Ukuba uyakwazi ukukhuthaza, uya kuba nabaphulaphuli
Ayisiyo malunga nokufundiswa, okanye malunga nokuqeqesha abasebenzi abalandela iprojekthi yakho. Kuya kufuneka ufumane elona thuba lilungileyo kubo, yiyo loo nto kufuneka ukhokele iprojekthi ekufuneka uyazi ukuba ungayidlulisa njani. Ukuba ugcina ukuma okufutshane neqela lakho, xa uthetha baya kukumamela. Kwaye ke, baya kukunceda ufezekise injongo yakho.
Phakathi kwakho nam
Njengoko besesitshilo ngaphambili, uzakufuna iprojekthi eqinileyo. Ukusuka kwindawo eqinileyo, ebonisa amandla akho obunkokeli. Oku kuya kuba nefuthe elihle kwiqela lakho, njengoko baya kukholelwa ukuba into abayenzayo ilungile. Ukuze iqela likholelwe kuwe, liya kudinga ukuzithemba lokwenza njalo ngaphandle kokubuza yonke into. Ukuseka imeko yokuthembana phakathi kwakho neqela lakho kuya kubaluleka.
Umntu kwisimo sakhe sokuqala ufuna umntu onezakhono zobunkokeli. Umntu othile, unempawu ezinamandla kunaye. Ngale ndlela unokukhokelwa ngamanyathelo abo kwaye baya kulandela ipatheni nganye. Gcina oko kuyinyani ukuthopha kuyakubaluleka ukuba neqela lomsebenzi elimanyeneyo.
Tsala oontanga bakho
Kuya kuxhomekeka emsebenzini owenzayo kwindawo yokuqala ukutsala abasebenzi abalungileyo kwiqela lakho. Kuxhomekeka kwindlela osebenza ngayo, ngexesha kunye nomgangatho, uya kutsala iqela lomsebenzi elinempawu ezifanayo. Baya kubona kuwe umsebenzi ozinikeleyo kwaye onomdla. Ukuba kwelinye icala usebenza ukungoneliseki, kakubi nangokukhawuleza, baya kukuxelisa ukuma kwakho.
Amandla enkokeli amiselwa ngubani omngqongileyo. Ngamanye amaxesha siyayibona nabahlobo, sixelisa okungaphakathi kwesangqa sabahlobo. Oku kuyasebenza kunye
Khuthaza iqela lakho
Ayisiyo eyokukhomba umntu ongalunganga, oku kuyabenza boyike ukuba bayaphazama. Kwimeko yokuyila kubalulekile ukuphuhlisa izimvo kunye nokwenza iimpazamo. Zama ngeendlela ezintsha kwaye ufumane into entsha. Ukuba ukhomba kwaye uhlekisa ngokukhangela umntu onetyala, ngekhe ukwazi ukuqhubela iqela lakho kwinjongo efanayo.
Ixabiso lakho njengenkokeli kuya kufuneka lilinganiswe ngabo bakungqongileyo. Ukuba ulandelelwano olulungileyo uya kuba nelifa elihle.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Imithetho eli-10 yokukhokela iprojekthi elungileyo yoyilo
Indlela abaphefumlelwe ngayo ukuba benze ii-superheroes